कोरोना संकटको वहाना, असमान शैक्षिक खाडल बढाउन उद्यत !
चीनको वुहानबाट शुरु भएको नोवेल कोरोना भाइरस (nCOVID-19) ले यतिखेर विश्व त्राहिमाम भएको छ । लाखौं संक्रमित र हजारौंको ज्यान गईसकेको छ । यो तथ्याङ्कमा हरेक दिन वृद्धि भईरहेको छ । भाईरसको फैलावटले उब्जाए...
विद्यालय शिक्षामा भएको शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको “चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश“ अभियान अन्तर्गत संवयमसेवक शिक्षक परिचालनको प्रकृया शुरु भएको...
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय पछि नेपालमा आधुनिक शिक्षा शुरुआत भयो । उक्त अवस्था देखि हालसम्म शैक्षिक विकासले ठूलो फड्को मारेको छ । धेरै संख्यामा शिक्षालयहरुको स्थापना भएका छन् । संख्याको हिसाबले देशमा...
स्वयंसेवक शिक्षक : शिक्षा प्रणालीमा खेलवाड
हाम्रो शिक्षामा सत्र प्रकारका शिक्षक लामो समयसम्मको गम्भीर समस्या बनेकै हो । ती मध्ये अस्थायी शिक्षक सधैंको विषय बने । अस्थायी शिक्षक आन्दोलनले दुई दशकसम्म दह्रो चर्चा पाएकै हो । आन्दोलन, वार्ता, सम्झ...
प्रदेशको आँखाबाट कार्यक्रम तर्जुमा र प्रभावकारिता
देखिने अवस्था मुलुकमा संघीयता शुरु भए पछि नागरिकका हित र भलो गर्न तीन वटा सरकार कृयाशिल छन् । ती सरकार अन्तर्गत धेरै निकायहरु बनाइएका छन् । ऐन नियम बनाइएका छन् । स्रोत साधन विनियोजन गरिएको छ । सिद्...
आर्थिक समस्या र मनोवैज्ञनिक असरका बिचमा परीक्षा
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा अर्थात् यो बर्षको एसईई आगामी बिहीबारबाट शुरु हुँदै छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पक्कै पनि उचित व्यवस्था मिलाएकै होला । परीक्षा सञ्चालन...
गत बुधबार बेलुका करिब साढे नौ बजेको थियो, म shared leadership सँग सम्बन्धित एउटा भिडियो युट्यवमा हेर्दै थिएँ । ल्यापटपको छेउमा नोटिफिकेसन आयो – सर नमस्कार ! सोचेँ - यति बेला म्यासे...
कति पढ्ने कि, के पढ्ने !
शिक्षाले मानव मूल्यहरूको अभिवृद्धि गर्न सक्नु पर्छ । सत्य, धर्म, शान्ति, पे्रम र अहिंसा मानवीय मूल्यहरु हुन् । यिनको संरक्षण, विकास र रक्षाका लागि शिक्षा सदैव तत्पर हुनुपर्छ । विडम्वना हामीकहाँ न शिक्...
विद्यमान प्रक्रियाले छान्न सक्दैन असल शिक्षक
ब्रह्मा, गुरु विष्णु,गुरु देव महेश्वर । गुरु साक्षात् परम् ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः संस्कृतमा व्यक्त यो अँश गुरूको महिमामा आधारित छ । गुरूलाई साक्षात् भगवानसँग सादृश्य गरिएको छ...
गणित करले हैन रहरले पढौं र पढाऔं
यति बेला गणित निकै चर्चामा छ । नेपाल सरकारले शैक्षिक बर्ष २०७७ देखि लागू गर्ने पाठ्यक्रममा कक्षा ११ र १२ मा गणित विषयलाई अनिवार्य विषयको रुपमा पठनपाठन गर्नुपर्ने पक्ष विपक्षमा आआफ्नै तर्क वितर्क ...
सिकाइका लागि जरुरी छ - मनोपरामर्श सहितको प्राज्ञिक गुण
शिक्षार्थीलाई मानसिक चिन्ताबाट मुक्त बनाई पठनपाठनमा ध्यानाकर्षण गराउन शिक्षा मनोपरामर्श प्रभावकारी विधि हो । जसरी वैज्ञानिकहरुले विभिन्न तथ्यहरुको अनुसन्धान, निरीक्षण र परिक्षण गरी नियमको प्रतिप...
टिक्नुको रहस्य : आर्शिवाद र श्राप हैन, आवश्यकता
विद्यालय शिक्षाको नीतिगत बहसमा संस्थाहरुको स्वामित्व सम्बन्धी छलफलले चाहिने भन्दा बढि समय पाउँछन् । निजी वा सरकारी कसरी ठिक वा वेठिक भन्ने विषयमा सहभागीहरु पहिल्यै आफ्ना धारणा बनाएर बसेका हुन्छौं । अन...
शिक्षकहरु गणितबाट कमाउने तर विद्यार्थी किन नरमाउने !
मानव जीवन गणितबाट शुरु भई गणितमै अन्त्य हुन्छ ! गणित भनेको अङ्क हो अर्थात् अङ्कको खेल हो । सामान्यतया गर्भधारण गरेको ९ महिनामा शिशुको जन्म हुन्छ । जन्मेको निश्चित दिन भित्र आ–आफ्नो धर्म संस्क...
प्रचलित शिक्षा ऐन नियमले विद्यालय शिक्षामा एक प्रधानाध्यापक रहने गरी २० भन्दा बढी बुँदामा निजको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । प्रधानाध्यापक आफैंमा मर्यादित र जिम्मेवार पूर्ण पद भएको तथ्य...